- Voalohany, jereo fa ny statut « Jumbo OK »Dia napetraka eo amin'ny lafiny ankavanana amin'ny tranonkala toy ny etsy ambany:
Raha mahita «- statut: No Jumbo », Midika izany fa tsy navadika ny famandrihanao Jumbo. Miezaha mifandray indray amin'ny kaontinao, amin'ny alàlan'ny bokotra «Hivoaka». Tokony hampihetsika ny fisoratana anarana Jumbo anao izy io.
- Raha hitanao ny statut « Jumbo OK », Fa ny hafainganam-pandehanao dia tsy ambony noho ny 220ko / s, dia zahao raha tsy miadana ny fantsom-pifidiananao amin'ny programa hafa manandrana misintona miaraka amin'izay.
- Rehefa vita ny fanesorana ny Jumbo azafady mba ahazoanao manokatra ny rindrambaiko efa mivoatra, Hovana ny URL Jumbo.
- Tokony hojerenao ihany koa raha mamela anao hanao fampidinana haingana ny Internet connexion-nao. Mety ilaina ny manao fitsapana amin'ny solosaina hafa sy ny connexion amin'ny Internet iray hafa hanamarinana fa tsy avy amin'ny solo-sainao ny olana.
- Mba hampisondrotana anao amin'ny hafainganam-pandeha avo indrindra, dia manoro hevitra anao izahay mba hampidina sy hametraka FlashGet, izay programa maimaimpoana mamela anao hampitombo ny hafainganam-pandehananao hatramin'ny 10 fotoana. Hitanao eto izany: http://www.flashget.com